Repoblika Demaokratikan’i Kongo: Ady Miantraika Amin’ny Ezaka Fiarovana Ny Rajako (Gorila) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Aogositra 2017 16:52 GMT
Tsy ampoizina tanteraka ny toe-javatra ao amin'ny Valam-pirenena Virunga ao Kongo. Miitatra ao amin'ny toerana onenan'ny Rajako arovana ao amin'ny tendrombohitr'i Virunga, toerana fehezin'ireo mpikomy ankehitriny ny ady ao Kongo. Manaraka ny toe-draharaha ny bilaogy Gorilla Protection, (Fiarovana ny Rajako) ary mamoaka vaovao ara-potoana. Ny vaovao farany indrindra dia momba ny fahasimban'ny toe-draharaha ary miresaka momba ny mahazo ireo rajako ao an-tendrombohitra manoloana ny fitohizan'ny ady.
Nody tara omaly alina ny iray tamin'ireo mpiambina ary velona soa aman-tsara. Raha niezaka nivoaka niaraka tamin'ireo ekipany madinika ambiny izy mba hijery ny misy ireo rajako, notafihan'ireo andian-dehilahy mitam-piadiana izy ireo.
Midika izany fa sarotra ho an'ny rehetra ny ao Bukima ary midika koa izany fa tsy tokony hijanona ao amin'ny toeran'ny rajako ireo mpiambina.